Tips Top Ukuze Iindawo ezinika umdla eYurophu By Train In 2020 | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Tips Top Ukuze Iindawo ezinika umdla eYurophu By Train In 2020
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 31/03/2021)
Ojikelezayo eYurophu ngololiwe na isiko omdala ushukuxwa ukuba akayi ndawo ngokukhawuleza – Loliwe zezona ekhule, uninzi lwe-eco-friendly, kunye neyona ndlela isebenzayo yokuhamba usuka kwenye indawo uye kwenye. Nangona inkqubo yethu itikiti kaloliwe kuthatha intlungu ngaphandle yokulungelelanisa yohambo kaloliwe, a lot of ukucwangcisa ngocoselelo iintsalela. Ukuze ukwazi ukucwangcisa uhambo ephelele ngeenxa Europe, Nanga amacebiso zethu phezulu ukuhamba eYurophu ngololiwe.
Plan your route when you Iindawo ezinika umdla Yurophu Train
Ukuya eYurophu ngololiwe kwi 2020 Kubalulekile ukuqaphela ukucwangcisa indlela yakho kunye nexesha oza kulichitha kwindawo nganye oya kuyo. ukuba Amsterdam, Berlin, London, milan, Paris, yaye Venice abakuluhlu lwakho kufuneka-see ingundoqo, azi indlela ngengqiqo ukwenza oku kwenzeke. Yenza uluhlu lwe iindawo ofuna ukubona yaye ngaloo ndlela unako kalukhuni sihlele uhambo lwakho. Gqiba imihla yakho zingaphi iintsuku oza kulichitha kwindawo nganye ukuba ugcwalise yakho indlela hambo.
Musa ukuzama apakishe uhambo lwakho kunye kwiindawo ezininzi kakhulu
One of the worst things you can do when you Travel Europe by Train is to try and fit in too much. Kukho mvelo ukuzama ijam izixeko ezininzi kunye namazwe kangangoko kunokwenzeka ukuba uhambo lwakho, kunjalo, akukho sizathu ukuthatha uhambo ukuba uza ukuba indawo nganye efanelekileyo! ukupakisha kakhulu kwiindawo ezininzi ukuba uhambo lwakho imali eninzi kwaye kujika iholide yakho ibe iimvakatjhi ehotele lokukhangela-ins kunye khangela-outs.
Kubalulekile kakhulu ukuba axhamle stop ngamnye ngokupheleleyo kunokuba ukuzama kwaye zihambelana kakhulu. Uya kubasindisa ku zokuhamba kwaye bafumane ixesha ukuhlola kwiindawo zakho.
Xa becwangcisa indlela yakho Iindawo ezinika umdla eYurophu Train, qiniseka ukuba ukhangela iimali mazwe. Ayizizo zonke amazwe Europe isebenzisa i Euro. Nkqu amanye amalungu EU, ezifana eBulgaria and Croatia, sebenzisa imali yabo leyo ngqo kwilizwe labo. Khangela le uluhlu lwe Euro kunye namazwe non-Euro.
Iposti ekwabelwana ngayo yiApp ekhawulezayo yokuGuqulela iMali (@currencyconverterapp)
indawo Book in advance
Nakuba kunokwenzeka ukuba ukubhukisha iihotele kunye neehostele njengoko usuka kwindawo ukuya kwindawo, sicebisa ukuba uzama konke okusemandleni akho ukuba ingafiki naphi kungekho yokuhlala elihambisana. Zama encwadini yakho kuleya/iihotele kwangaphambili ukuba enye imizi emithathu yokuqala, ingakumbi imizi ezithandwayo ngexesha lonyaka ephezulu eBerlin Prague. iziganeko, njenge mikhosi emizini, nayo kuba nefuthe ekufumanekeni. Hayi sizixhalabise ngendlela yokuhlala uyakwazi ukuchitha ixesha lakho ukwenza izinto ezininzi, kufana ubuke nokukhathalelwa ixesha sakho free!
Ebusuku kangangoko kunokwenzeka – Iindawo ezinika umdla Yurophu Train
Ukuba kuphela uceba kokuchitha imini nje omnye emzini, zama ukufumana khona train ebusuku. Ngaba nani nifuna ukuba ukuchitha ixesha lakho emini ohambahambayo Ngokuthatha uloliwe ebusuku, Unga Gcina imali on yokuhlala kwaye ube nexesha elingakumbi ukuhlola oya kuyo. Xa kubhukishelwa ubusuku yakho itikiti train qiniseka ukuba ukhangela elide kangakanani kuthatha ukufumana ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye.
Thetha nabantu kunye Travel zakho Europe ngu Train
Qiniseka ukuba uthethe bakule okanye ezinye abakhweli kwi yakho uhambo. Ulwazi ukuba uya kukunika unokuba exabiseke ngaphezu nantoni uza kufumana isikhokelo zokuhamba. Ngokuxoxa nabanye, ukuze baziswe kwi ezindaweni zokudla, ukuba uye kudanisa, ubuncwane obufihliweyo, kakhulu iindawo indawo, kwaye indlela elula ukuhambahamba.
Ngaba uceba Iindawo ezinika umdla eYurophu Ukuqeqesha 2020? Qalisa ukugcina ukuya kumhla kunye itikiti best uloliwe linikeza phezu kwethu Facebook yaye Twitter lamaphepha okanye sityelele Gcina A Isitimela online ngenxa fares uloliwe okukhulu eYurophu
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-tips-travel-europe-train-2018%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / pl ukuba / uyeke okanye / ru kwiilwimi ezininzi.